Letter From A Friend (2) | U.N.O.B
တစ်ခါက သိပ်ချစ်ကြတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး ၂ယောက် ရှိကြပါတယ်.. သူတို့၂ယောက်ချစ်နေတဲ့ အကြောင်းကို ကောင်မလေးရဲ့ အဖေက သိသွားတော့ ကောင်လေးနဲ့ လုံးဝကို သဘောမတူပါဘူးတဲ့… ဒါနဲ့ဘဲ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးတို့ ၂ယောက်ဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လဲ မခွဲနိုင်မခွာရက် သိပ်ချစ်နေ ကြတော့ အိမ်ကနေ ထွက်ပြေးကြပြီး ၂ယောက်တည်းကမ္ဘာကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တည်ဆောက်ကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်..
သူတို့၂ယောက် ထွက်ပြေးသွားတော့ ကောင်မလေးအဖေက နေရာအနှံ့ လိုက်လို့ရှာပေမဲ့ ဘယ်မှာမှကို ရှာလို့မတွေ့ပါဘူး… နောက်ဆုံးတော့ ကောင်မလေးအဖေဟာ သူတို့၂ယောက်လုံးကို ပြန်လာခဲ့ဖို့နဲ့ လက်ထပ်ပေးစားပါမယ် သူတို့ ၂ယောက်ကို ဘဘောတူ လက်ခံပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာထည့်ရပါတော့တယ်…
ကြော်ငြာကို တွေ့တဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးတို့ဟာ အိမ်ကို ပြန်လာကြပြီး မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြပါတယ်… နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ သူတို့၂ယောက်ဟာ မင်္ဂလာဆောင် ၀တ်စုံရွေးဖို့အတွက် မြို့ထဲကို ထွက်လာကြပါတယ်.. အဲဒီမနက်ခင်းမှာ ကောင်လေးဟာ ရှပ်အင်္ကျီအဖြူလေးကို ၀တ်ဆင်လာပါတယ်.. မြို့ထဲမှာ တစ်ဆိုင်ပြီး တစ်ဆိုင် ၀င်ထွက်ကာ မင်္ဂလာဝတ်စုံကို ရွေးချယ်ကြရင်းနဲ့ နေက ပူသထက်ပူလာတော့ ကောင်မလေးဟာ ရေငတ်လာပါတယ်.. ဒါနဲ့ ကောင်လေးကို ရေဆာကြောင်း သူက ပြောတော့ ကောင်လေးကလဲ လမ်းတစ်ဘက်မှာရှိတဲ့ စတိုးဆိုင်လေးတစ်ခုမှာ ကောင်မလေး အတွက် ရေသန့်ဘူး သွားဝယ်ဖို့ လမ်းကို ဖြတ်ကူးလိုက်ပါတယ်..
ဒီအချိန်မှာဘဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဘရိတ်ပေါက်နေတဲ့ ကားတစ်စီးဟာ ဘယ်လိုမှ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ကောင်လေးကို ပြင်းထန်စွာ တိုက်မိသွားပါတယ်.. ကောင်မလေးဟာ ချက်ခြင်းဘဲ ကားတိုက်ခံရပြီး ခပ်ဝေးဝေး ကို လွှင့်စင်သွားတဲ့ ကောင်လေးရှိရာကို ပြေးသွားပါတယ်. ဒီမှာတင် မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် ကောင်မလေးဟာ ကောင်လေးဘေးနားမှာဘဲ သတိလစ်ပြီး လဲကျသွားပါတယ်.. သိပ်ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ ကားတိုက်ခံရတဲ့ အရှိန်ကြောင့် ကောင်လေးဟာ မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ကို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်နေခဲ့ပြီး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးနေပါပြီ….
နာရီပေါင်း အတော်ကြာတော့မှ ကောင်မလေးဟာ ပြန်သတိရလာပါတယ်.. ကောင်လေးအိမ်က မိသားစုနဲ့ ကောင်မလေးမိသားစုတို့ဟာ ကောင်လေးကို မီးသဂြိုင်္လ်ဖို့ အမြန်ဆုံး စီစဉ်ကြပါတယ်.. ဘာလို့ဆိုတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရုတ်ပျက်ဆင်းပျက် ကားတိုက်ခံထားရတဲ့ အတွက် သူ့ရုပ်ကလပ်ကို ကြာရှည် မထားသင့်ဘူးလို့ ယူဆတာကြောင့်ပါ..
ကားတိုက်ခံရပြီးလို့ ၂ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ ကောင်မလေးအမေဟာ အိပ်မက်တစ်ခု မက်ပါတယ်.. အိပ်မက်ထဲမှာ အသက်ကြီးကြီး မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ကောင်မလေးရဲ့ အကျီ င်္မှာ စွန်းပေနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကောင်လေးရဲ့ သွေးတွေကို အမြန်ဆုံး ပြောင်စင်အောင် လျှော်ဖွတ်ဖို့ ကောင်မလေးရဲ့ မိခင်ကို သတိလာပေးပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ အမေက အိပ်မက်ကို ဂရုမထားဘဲ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့နဲ့ နေလိုက်ပါတယ်.. နောက်တစ်နေ့ညမှာတော့ ကောင်မလေးရဲ့ ဖခင်ဟာ အလားတူအိပ်မက်ကို ထပ်မက်ပါတယ်… ဖခင်ကလဲ အိပ်မက်ကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဘဲ သဘောထားလိုက်ပါတယ်..
တတိယအကြိမ် ညမှတော့ အဲဒီအိပ်မက်ကိုဘဲ ကောင်မလေးက မက်ပါတော့တယ်.. ကောင်မလေးဟာ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့ အိပ်မက်ကနေ လန့်နိုးလာပါတယ်.. သူ့မိခင်နဲ့ ဖခင်ကို အိပ်မက်အကြောင်း ပြောပြတော့ ၃ယောက်လုံးဟာ ဒီအိပ်မက်ကိုဘဲ ထပ်တူမက်နေတယ် ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်.. ဒီတော့ ကောင်မလေးမိခင်က စွန်းပေနေတဲ့ သွေးတွေကို အမြန်ဆုံးလျှော်ဖွတ်ဖို့ ကောင်မလေးကို တိုက်တွန်းပါတယ်.. ကောင်မလေးဟာ သွေးစွန်းနေတဲ့ အ၀တ်ကို အမြန်ဆုံးဘဲ လျှော်ဖွတ်ပါတော့တယ်.. ဒါပေမဲ့ အားလုံး ပြောင်စင်အောင် လျှော်လို့မရဘဲ တစ်ချို့ သွေးစက်လေးတွေဟာ ကျန်ရစ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်…
နောက်ညမှလဲ ကောင်မလေးဟာ ဒီအိပ်မက်ကိုဘဲ ထပ်ပြီး မက်ပြန်ပါတယ်.. အဲဒီညအိပ်မက်မှာတော့ အဖွားကြီးဟာ ကောင်မလေးကို နောက်ဆုံးအကြိမ် အနေနဲ့ သွေးစွန်းအ၀တ်ကို ပြောင်စင်အောင် လျှော်ဖွတ်ဖို့နဲ့ ပြောင်အောင် မလျှော်ဘူးဆိုရင် တစ်စုံတစ်ခု အဖြစ်အပျက်ဟာ မကြာခင်မှာ ဖြစ်ပျက်လာဖို့ ရှိတယ်လို့ သတိပေးပါတယ်.. ကောင်မလေးဟာ အိပ်မက်က လန့်နိုးနိုးချင်း သူ့ရဲ့ အ၀တ်ကို ပြောင်စင်အောင် ကြိုးစားပြီး လျှော်ဖွတ်ပြန် ပါတယ်.. လျှော်ရလွန်းလို့ သူမရဲ့ အ၀တ်လေးဟာ စုတ်ပြဲလုနီးပါး ဖြစ်နေသလို သူမလက်ဖ၀ါးလေးတွေဟာလည်း နီရဲပွန်းပဲ့လို့ နေပါပြီ… ဒါပေမဲ့ စွန်းနေတဲ့ တစ်ချို့ သွေးစလေးတွေ ကတော့ မပြောင်နိုင်သေးပါဘူးတဲ့.. ကောင်မလေးဟာလည်း မောပန်း နွမ်းနယ်လွန်းနေပြီး နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်လိုမှ မစင်နိုင်တဲ့အတွက် ဒီအတိုင်း ထားလိုက်ရ ပါတော့တယ်..
အဲဒီညနေမှာ ကောင်မလေးရဲ့ အဖေနဲ့အမေဟာ ကိစ္စ တစ်ခုနဲ့ အပြင်ထွက်သွားတော့ အိမ်မှာ ကောင်မလေး တစ်ယောက်တည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်.. တစ်အိမ်လုံးလဲ ခြောက်ခြားစရာ ကောင်းလောက်အောင် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့ နေပါတယ်… အဲဒီ အချိန်လေးမှာ တံခါးခေါက်သံတစ်ခုက တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်ခြင်းကို ဖြိုခွင်းပြီး ပေါ်ထွက် လာပါတယ်.. တံခါးခေါက်သံကြောင့် ကောင်မလေးဟာ တံခါးကို သွားဖွင့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ အိပ်မက်ထဲက အဖွားကြီးကို တွေ့လိုက်ရတဲ့ အတွက် ကြက်သီးမွေးညှင်းများ ထောင်ထလာအောင် ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့မိပြီး ကြက်သေ သေနေမိ ပါတော့တယ်.. အဖွားအိုက ကောင်မလေးကို စိမ်းစိမ်းကြီး ကြည့်လိုက်ပြီး သူ့လက်ထဲမှာ ကိုင်လာတဲ့ အရာလေးတစ်ခုကို ကောင်မလေးထက်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ ကောင်မလေးကို သူ့ရဲ့ အသံ အက်ကွဲကွဲနဲ့ စကားတစ်ခွန်း ပြောလိုက်ကာ အိမ်ရှေ့ကနေ လှည့်ထွက်သွားပါတယ်.. ကောင်မလေးဟာ တုန်လှုပ်ခြင်းများစွာနဲ့ သူမလက်ထဲ ရောက်လာတဲ့ အရာလေးကို အထိတ်တလန့် ကြည့်လိုက်မိပါတယ်… သူမ တွေ့လိုက်တဲ့ ဟာလေးက လုံးဝ မမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာ …. အဲဒါလေးက …… ? ? ?
အဖွားကြီး ပြောသွားတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကတော့ “ဒီဆပ်ပြာ နဲ့ လျှော်မှ စင်မှာ” တဲ့… 🙂 🙂 🙂
ဆပ်ပြာမှုန့်ကြော်ငြာတာ ဟုတ်ဘူးနော်… 😛
NyuntLwin August 13, 2010 at 11:32 am Reply